फेस बुक को सहयोगले आफ्नो योन इच्छा पुरा ……. – nepali sex stories
July 20, 2017 sexstoryusuk2 Comments on फेस बुक को सहयोगले आफ्नो योन इच्छा पुरा …….
फेस बुक को सहयोगले आफ्नो योन इच्छा पुरा …….
मेरा योनकथा पढेर शुसिलाले ( नाम परिवर्तन )मलाई मेरो याहू आइडी मा मेसेज पठाउनु भएछ । मैले पनि सो मेसेजको जबाफ पठाए। आफ्नो श्रीमानको योन दुर्बलताले उहालाई सारीरिक सम्बन्धमा निकैनै अभाबको मह्सुस भएको रहेछ । योन इच्छालाई दबाएर राख्न हुँदैन भन्ने कुरा मैले शुसिलाबाट नै जानेको हु। तर शुसिलालाई मुख मैथुनको बारेमा त्यती ज्ञान रहेन छ । हाम्रो पहिलो भेट मै शुसिलाले ” तपाईं खाली चाट्नेर चुस्ने कुरामात्र लेख्नु हुन्छ । तपाईंलाई त्यसो गर्दा घिन लाग्दइन ?” भनेर सोधिन । मैले पनि उनीलाई मुख मैथुनको बारेमा निकैनै लामो प्रबचन सुनाए ।
शुसिला त राजी थिनन तर बल्बल्ल मैले राजी बनाएर उन्को गाउन भित्र हात घुसारी उन्को माल चलाऊन थाले । कारीब पाँच सात मिनेट उन्को माल चलाऊदा चलाऊदै उन्ले ” स्स्स्स्साअा ” गर्दै चिल्लो पानी फाल्न थालिन । मैले उन्को गाउन माथि सारी पेन्टी बाहिरैबाट माल चाट्न थाले । ” स्स्सा ओ उफ्फ्फ ” भन्दै उन्ले मेरो टाउकोमा आफ्नो हात नचाउन थालिन । मैले उन्को पेन्टी तल सारी उन्को माल भित्र जिब्रो नचाउन थाले । कहिले चाट्दै त कहिले टिसीलाई जिब्रोले चलाऊदै उन्को मालको स्वाद लिदै थिए। ” ओ हो उफ्फ्फ्फ्फ्फ स्स्साअाआ ” भन्दै शुसिला तलबाट चाक उफार्दै पानी फाल्न थालछिन । उवा क्या मिठो थियो त्यो मालको पानी । अहिले सम्म त्यसको स्वाद जिब्रोमानै झुन्डिएको छ ।
कारीब बिस मिनेट सम्म माल चाटेर उन्को पनि झारिसके पछी मैले उन्लाई घोप्टो पारी उन्को चाकको प्वालमा जिब्रो नचाउन थाल्दै उन्को माल भित्र औंला चिराउन थालदा त ” उफ्फ्फ्फ्फ्फ्फ्फ अाअाअा ऊूऊू स्स्स्सासा निकै मजा वो सरद निकै ” भन्दै उनी कराउन थालछिन ।
एक घण्टा त मैले उन्को माल र चाक चाटि चाटि उन्लाई पागल्नै बनाये ।
“अब जिब्रो होइन सरद तिम्रो हतियार छिराउ मलाई थिच मलाई घोडा बनाउ सरद मलाई मार ” भन्दै शुसिला कराए पछी म उनी माथि चडेर चिक्न थाले । कारीब बिस बाइस मिनेटको चिकाइ पछी ” उुउुम्म्म्म्म्म अह्हह्ह्हह्ह उफ्फ्फ्फ्फ्फ स्स्स्स्ससस्स्स ” गर्दै उनी पुरै झरिन ।
मैले पनि उन्लाई देखाउदै आफ्नो पनि छोलेर झारी दिए। आजकल ” सरद तिमीले भनेको ठीक हो चिकाउन भन्दा त चटाउन मज्जा ” शुसिला भन्छिन ………
2 thoughts on “फेस बुक को सहयोगले आफ्नो योन इच्छा पुरा …….”
Anonymous July 20, 2017 — 6:45 pm
bin July 20, 2017 — 6:46 pm
all stories is good
Next ति दिन हरु